नेपाल निर्वाचन २०७४ - प्रतिनिधिसभा/प्रदेशसभा | LIVE UPDATE | RESULTS - चुनावमा छैनन् युवा
चुनावमा छैनन् युवा
श्रीधर खनाल/लक्ष्मण पोखरेल | मङ्गलबार, १९ मङि्सर २०७४
रूपन्देहीको मझगावा मर्चवारमा मतदाता शिक्षा दिँदै कांग्रेस कार्यकर्ता । तस्बिरः लक्ष्मण पोखरेल
बुटवल : देशका हरेक परिवर्तनमा काँध थापेका युवा यसपटकको चुनावी प्रचारप्रसारको दौडमा भने कमै देखिएका छन् । नेताहरू प्रचारप्रसारमा व्यस्त रहँदा यस क्षेत्रका धेरै युवा आफ्नो काममै व्यस्त थिए, जसका कारण युवा सहभागिताबिनै चुनाव प्रचारप्रसारको काम सकिएको छ ।
विगतका निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा ज्यान फालेर लागेका गोनाहाका पीताम्बर यादवलाई अहिलेसम्म चुनाव लागेको छैन । सोमबार आफ्नो खेतमा पानी लगाउँदै गरेका यादवले भने, ‘गहुँ फलेन भने के खाने ? चुनावमा गएर गहुँमा पानी कसैले लगाइदिँदैन ।’
बुटवल बुद्धनगरमा सिलौटो बनाउदै गरेका राजु कुसवारी पनि यसपालिको चुनावमा कतै गएनन् । सिलौटा बनाएर घरमै बसे । विगतका चुनावमा जुलुसमा गएको सम्झँदै उनी भन्छन्, ‘खै यसपालि जानै मन लागेन । चुनावमा मात्र नेताहरूले खोज्ने हुन् । अरू बेला चासो नदिने भएपछि काम छाडेर किन जाने ? ’
रूपन्देहीमा विगतका चुनावहरूमा युवाको संलग्नता राम्रै देखिन्थ्यो । यो चुनावमा भने मत माग्नेदेखि सभा र घरदैलोमा युवाको सहभागिता कम भयो । प्रौढले सबै काम गरेको देखियो । जिल्लाको चुनावलाई नजिकबाट नियालेका पूर्वसभासद् विनोद पहाडीले पनि अहिलेको चुनावमा युवा सहभागिता कम भएको प्रतिक्रिया दिए ।
रूपन्देहीको बुटवलमा मात्र होइन, भैरहवालगायत क्षेत्रमा उद्योग कलकारखानाको बाहुल्य छ । यी सबै उद्योगमा यस क्षेत्रका युवाले काम गर्दै आएका छन् । अर्कोतर्फ खेतीको समय भएकाले पनि केही युवा खेतमा काम गर्दै गरेको अवस्थामा भेटिन्थे ।
युवाहरूमा राजनीतिप्रतिको आकर्षण कम देखिएको जिल्ला युवा समिति रूपन्देहीका अध्यक्ष वसन्त ढकालले बताए । ‘युवाहरू व्यवसायमा आबद्ध छन् । स्वदेशमा राजगारी नपाउनेहरू विदेश पलायन भए । पहिलेजस्तो राजनीतिक दलका युवा संगठन पनि अहिले सक्रिय नभएकाले पनि चुनावी प्रचारमा युवा देखिएनन्’, उनले भने ।
रूपन्देहीमा विगतका चुनावमा युवाको संलग्नता राम्रै देखिन्थ्यो । यो चुनावमा भने मत माग्नेदेखि सभा र घरदैलोमा युवाको सहभागिता कम देखियो ।
बुटवल-१४ का विमल पाण्डे यसअघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नौ दिनसम्म चुनावी प्रचारमा हिँडेका थिए । तर अहिले उनी एक दिन पनि प्रचारमा निस्किएनन् । उनलाई चुनावमा जान मन पनि लागेन । स्थानीय तहमा आफ्नै छिमेकी उम्मेदवार भएको उनले बताए । भने, ‘जोस आउँथ्यो । अहिले त कहिलेकाहीँ नाम सुनेका नेता चुनावमा उठेका छन् । नभेटेकै मान्छेको चुनाव प्रचारमा के जानु ? प्रचारमा गए पनि उनीहरूले चिन्ने होइनन् ।’
विगतका निर्वाचनमा मोटरसाइकल र्‍यालीमा युवाहरूको भीड नै हुन्थ्यो । अहिले आचारसंहिताले र्‍याली निस्किएका छैनन् । र्‍याली ननिस्किएकै कारण एउटा उम्मेदवारको ३० लाख रुपैयाँबराबरको इन्धन बचेको बताइन्छ । निर्वाचन आयोगले शक्ति प्रदर्शनमा रोक लगाएका कारण प्रचारप्रसारमा युवा नआएको नेपाल तरुण दलका क्षेत्रीय सभापति हसन्त लामाले बताए । ‘केही युवा प्रचारमा आएका छन् । धेरैको चासो चुनाव प्रचारमा छैन । मतदान गर्न भने आउलान्’, उनले भने ।
चुनाव प्रचारप्रसारको अन्तिम दिन सोमबार मात्रै बुटवलमा दुई चुनावी सभा भए । वाम गठबन्धनले युवा र्‍याली आयोजना गर्‍यो । प्रचारप्रसारमा युवा नसमेटिएका कारण गठबन्धनले र्‍याली आयोजना गरेको बताइएको छ । विगतका चुनावमा पार्टीका नेताले युवाको दुरुपयोग गरेको एमालेको भ्रातृसंगठन युवा संघ नेपालका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य देवराज पोखरेल बताए । ‘अहिले युवाहरू दुरुपयोग भएनन् । दलको नाममा युवाको ऊर्जा व्यक्तिले गलत प्रयोग गरे भन्ने सोचका कारण उनीहरू फिल्डमा नआएका होलान्’, उनले भने ।
युवाको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको सोचाइमा राजनीतिप्रति युवाहरूको हेर्ने दृष्टिकोण ठीक छैन । युवाहरूले अहिले पनि राजनीतिलाई स्वार्थको खेलका रूपमा हेर्दै आएका छन् । नेपाल जेसिसका पूर्वअध्यक्ष जगत पोखरेलले भने, ‘पहिला विद्यार्थीदेखि युवाहरूको गलत प्रयोग गरियो । तर अहिले राजनीतिक दलहरूले युवाको गलत प्रयोग गर्न सकेनन् । युवाहरूले पनि गलत प्रयोग हुन चाहेनन् ।’ पूर्वअध्यक्ष पोख्रलेको विचारमा दलहरूले अहिलेको चुनावमा युवा परिचालन गर्न नखोजेका भने होइनन्, नसकेका हुनन् ।